Ka ganacsiga Dadka “Human Trafficking” | HimiloNetwork
Ka ganacsiga Dadka “Human Trafficking”
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka August 5, 2015	0 292 Views
Nepal—dad-ka-ganacsigu waa marin aad halis ugu ah Nepal. Nuuca ugu tiiraanyada badan ee dad-ka-ganacsiga ka jira Nepal waxaa weeye daabulida gabdhaha. Ugu badnaan 10,000 oo gabdhood ayaa sanad kasta Nepal looga daabulaa dunida inteeda kale sababo la xiriira midabkooda gibilka jilcan. Xoogsatada lasoo sandulleeyay ayaa sidoo kale Hindiya uga yimaada Nepal.
Uganda—dalka Ugaandha waa dal dhaca bariga Afrika. Dadka reer Ugaandha waxay muddo dheer la tacaali jireen dagaallada dowladooda iyo fallaagada dhex-mara. Ugaandha waa dal sabool ah. Fallaagadu ma heli karto qarash ay ku bixiyaan ciidamo, sidaas darteed, waxaa jira caruur si qasab ah lagu dagaal-galiyo. Caruurta ayaa lagu sandulleeyaa inay qaadaan qoryo ka itaal wayn halisna galiya naftooda. Gabdhaha ayaa sidoo kale lagu dirqiyaa in loo galmoodo. Mararka qaar caruurta waxaa loo dilaa si loo gato xubnahooda muhiimka ah kuwaas oo ku kaca qiimo sarreeya.
Ghana—dalka Ghana oo dhaca galbeedka Afrika ma ahan dal sabool iyo tanaad toona ah. Xeebtii dahabka ayaa lagu magacaabi jiray xilligii gumeystaha. Waxaa jira shaqooyin u badan macdan qodista. Marka si loo helo xoogsato qodi karta goobaha dihan, caruurtu waa bar-tilmaameedka koobaad. Waxaa yaabka badanse waxaa weeye in caruurtani aanay helin xaqii dhididkooda. Gabdhaha ayaa iyaguna dhillaysi lagu jujuubaa. Xaaladda ay caruurtani ku nool yihiin si guud, waa xaalad aad u adag. Kolkol caruurtani waxaa loo dhaawacaa ujeeddo ah si lacag ay uga helaan dawarsiga beer-nugleyda, hayeeshe, lacagtani toos waxay gacanta ugu gashaa dad-ka-ganacsadayaasha.
Shiinaha—dalka Shiinaha waa dalka sara-kac dhaqaale kusii socda oo qofka kasta is-weydiinayo marka uu noqon doono awoodda dunida “super power”. Shiinaha waa isha dad-ka-ganacsiga. Dadka waxaa looga ganacsadaa sandulleyn shaqo iyo dhillaysi jujuub ah. Tira badnaanta dadka ku nool darteed, xoogsigu waa raqiis. Tani waxay jid u furtay dad-ka-ganacsadayaasha oo helay howl si fudud ku siin karta lacago badan inay kaga sameeyaan. Dhillaysiga qasabka ah wuxuu xittaa ka dhacaa isla soohdimaha Shiinuhu la wadaago dalalka qaar.
Allow iilka nagu dhowr
—ifka nagu xanaanee—
Na ilaali Rabbiyow.”
Gabaygii Ergadii Furqaan iyo Hadraawi.
Qalinkii: Zakariya Hassan “Hiraal.”
Previous: Ka ganacsiga Dadka “Human Trafficking”
Next: Damiirku ha shaqeeyo!!
Ganesh Rakh: Dhaqtarka lacag la’aan ku dhaliya haweeneydii gabar dhasha
Waa Waaya’aragnimo Xanuun badan Noqoshada Qaxooti!
Muslim daryeel bilaash ah u sameeya carruurta la xanuunsan xanuunka halista ah ee maskaxda dilooda.
Daawo – Geed dhexdiisa ay Biyuhu kasoo burqadaan.